Ithegi: amakhonkco »Iphepha lesi-2 le-3» Martech Zone
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ekugqibeleni ufumane ukuqala kwakho emhlabeni kodwa akukho mntu unokukufumana nasiphi na isiphumo sokukhangela. Kuba sisebenza ngeziqalo ezininzi, lo ngumcimbi omkhulu… iwotshi iyaluphawula kwaye kufuneka ufumane ingeniso. Ukufunyanwa ekufuneni kuqoqosho ngakumbi kunokuqesha iqela eliphumayo. Nangona kunjalo, uGoogle akanobubele kakhulu kwisizinda esitsha. Kule vidiyo, uMaile Ohye ovela kuGoogle uxoxa ngento onokuyenza
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Inkxaso yentengiso ibonisa ixabiso elibalulekileyo ngaphaya kokubonakala kwegama kunye nokugcwala kwewebhusayithi. Abathengisi abanobuchule namhlanje bajonge ukufumana eyona nkxaso-mali, kwaye enye indlela yokwenza njalo kukusebenzisa izibonelelo zokuphuculwa kweinjini yokukhangela. Ukuphucula inkxaso-mali yentengiso nge-SEO, kuya kufuneka uchonge iintlobo ezahlukeneyo zenkxaso ezikhoyo kunye neendlela eziphambili eziyimfuneko ekuhlalutyeni ixabiso le-SEO. Imidiya yesiNtu- uPrinta, iTV, iNkxaso mali kwiRadiyo ngemithombo yemveli ngokwesiqhelo iza
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Kukho isizathu sokuba sisebenzise imifanekiso emininzi apha Martech Zone… Iyasebenza. Ngelixa umxholo wesicatshulwa ugxile, umfanekiso ulinganisa amaphepha kwaye ubonelela ngeendlela zokuba abafundi bafumane umbono okhawulezileyo wokuzayo. Imifanekiso sisicwangciso esiliweyo xa kuziwa ekuphuhliseni umxholo wakho. Ukuba awukabikho-zama ukubonelela ngomfanekiso walo lonke uxwebhu, iposi okanye iphepha kwiphepha lakho
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Zifana ngantoni iWashington Post, Iindaba ze-BBC, kunye neNew York Times? Bacebisa umxholo womxholo wonxibelelwano kwiiwebhusayithi zabo, besebenzisa isixhobo esibizwa ngokuba yiApture. Endaweni yokuqhagamshela isicatshulwa esimileyo esilula, amakhonkco otshintsho aqala ngapha kwefestile kwimouse ngaphezulu kunokubonisa uluhlu olubanzi lomxholo onxulumene nomxholo.
I-SEO: 10 Qhagamshela Izilingo zokuphepha
NgoLwesine, Novemba 5, 2009 NgoMvulo, Septemba 21, 2015 UAdam Omncinci
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu 5 ″ /> Imigangatho yegolide kaGoogle yokuba iwebhusayithi kufuneka ibekwe kwinqanaba nokuba iyaqhubeka ukutshintsha ngokuhamba kwexesha, kodwa kangangexesha elithile eyona ndlela ingcono ayitshintshanga… i-backlinks ezifanelekileyo ezivela kwiindawo ezisemthethweni, ezinegunya. Kwiphepha lokuSebenzisa iiNjini zoKhangelo kunye nomxholo omninzi onokufumana indawo yakho kwisalathiso samagama aphambili, kodwa umgangatho we-backlinks uya kuqhuba isikhundla. Ukusukela i-backlinks ibe yinto eyaziwayo, uninzi lwekhonkco lokudibanisa kunye neenkonzo ziyaqhubeka
Edlulileyo 1 2 3 Next →